तपाईंको आँगन वा बगैंचामा न्यानोपन दिनको लागि बाहिरी फायर पिटहरू | बेजिया
मारिया vazquez | 13/05/2022 18:00 | घरका सामानहरू
के तपाईंले गत गर्मीको अन्त्यमा प्रस्ताव गर्नुभयो कि यस वर्ष तपाईंले बाहिरी ठाउँहरू नवीकरण गर्नुहुनेछ? तत्वहरू समावेश गर्न सुरु गर्नुहोस् जसले उनीहरूमा व्यक्तित्व मात्र थप्दैन तर तिनीहरूलाई थप कार्यात्मक पनि बनाउँदछ। जस्ता वस्तुहरू बाहिरी आगो पिटहरू जुन हामी आज प्रस्ताव गर्छौं।
तपाईले आफ्नो बगैंचा वा आँगनको फाइदा लिने समय विस्तार गर्न तपाईले खोजिरहनु भएको ब्राजियरहरू हुन्। तिनीहरू दिनको समयमा मूर्तिकला हुन् र बाहिरी ठाउँहरू देखिन्छन् चिसो रातहरूमा तातो गर्मी को। आफ्नो बाहिरी ठाउँमा यसको आकार र शैली अनुकूलन गर्नुहोस् र फरक पार्नुहोस्!
1 तपाईंको बाहिरी ठाउँमा ब्राजियर समावेश गर्ने कारणहरू
2 brazier को प्रकार
3 गोलाकार आकारहरु संग धातु
4 स्टोन बायोएथानोल ब्राजियरहरू
तपाईंको बाहिरी ठाउँमा ब्राजियर समावेश गर्ने कारणहरू
के तपाईको बाहिरी ठाउँबाट केहि हराइरहेको छ? कहिलेकाहीँ हामीसँग त्यो भावना हुन्छ तर हामी यो के हो भन्ने बारे स्पष्ट छैनौं कि हामीले समावेश गर्नुपर्छ ताकि यो गायब हुन्छ। फायर पिट तपाईले खोजिरहनु भएको हुन सक्छ- त्यहाँ पक्कै पनि तपाईको बाहिरी ठाउँको डिजाइनमा समावेश गर्न चाहने धेरै कारणहरू छन्:
यसले बाहिरी ठाउँहरूको फाइदा लिन अनुमति दिन्छ गर्मीको सबैभन्दा चिसो रातहरू।
आँगन र बगैंचाहरू उज्यालो गर्नुहोस् रातको समयमा, एक घनिष्ठ र न्यानो प्रकाश प्रदान गर्दै।
तिनीहरू वरपर एक तत्व बन्छन् परिवार जम्मा गर्नुहोस्।
तिनीहरू व्यक्तित्व र न्यानोपन थप्छन् बाह्य अन्तरिक्ष डिजाइन गर्न
काठ वा कोइला जलाउनेहरू तिनीहरू ग्रिलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा, धेरै डिजाइनहरूले एक समावेश गर्दछ।
brazier को प्रकार
हामीले ब्राजियरहरूलाई तिनीहरू बनाइएको सामग्री वा तिनीहरूले लिने आकार अनुसार वर्गीकृत गर्न सक्छौं। तथापि, हामीले हाइब्रिडमा सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारका ब्राजियरहरू हाइलाइट गर्ने निर्णय गरेका छौं, ती दुबै जुन तपाइँलाई फेला पार्न सजिलो हुनेछ।
गोलाकार आकारहरु संग धातु
दिनको समयमा तिनीहरूले जस्तै व्यवहार गर्छन् बगैचा मा एक मूर्तिकला र सूर्यास्तमा तिनीहरू एक ब्रेजियर बन्छन्, तिनीहरूलाई तपाईंको टेरेस, आँगन वा बगैचा सजाउनको लागि उत्तम टुक्रा बनाउँदछ। कालो पाउडर-लेपित फायर पिटहरू स्थानिय रूपमा सुरुचिपूर्ण छन्, यद्यपि यो अक्सिडाइज्ड डिजाइनहरू हुन् जुन टाउको घुमाउन र बाहिरी ठाउँमा एक avant-garde स्पर्श थप्न सबैभन्दा उपयुक्त छन्।
गोलाकार आकारहरु संग धातु braziers सजावट को लागी विशेष गरी उपयुक्त छन् सानो बाहिरी ठाउँहरू किनकि तपाईंले 51 सेन्टिमिटर व्यासका डिजाइनहरू फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई यसमा अनुकूलन गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईलाई आवश्यक पर्नेछ, हो, दाउरा भण्डारण गर्नको लागि अर्को सानो ठाउँको आवश्यकता छ जुन तपाईले त्यसमा जलाउनुहुनेछ।
धातु ब्राजियरहरूको खातामा लिनको लागि अर्को फाइदा भनेको तिनीहरू हुन् आर्थिक रूपमा पहुँचयोग्य; तपाईंले तिनीहरूलाई €150 बाट फेला पार्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तिनीहरू अन्य विकल्पहरू भन्दा हल्का छन्, जसले तपाईंलाई स्थानहरू परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ जब तपाईंलाई यसलाई अर्को तरिकामा प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
स्टोन बायोएथानोल ब्राजियरहरू
आधुनिक सिल्हूट र ढुङ्गाको फायर पिटहरूको सफा लाइनहरूले कुनै पनि बाहिरी ठाउँमा शैली थप्नेछ, ठूलो वा सानो। को प्रयोग बायोएथानोल इन्धनको रूपमा, यसलाई थप सरल र सफा प्रयोग गर्नेछ।
तपाईले यस प्रकारको ब्राजियरहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ गोलाकार वा आयताकार आकारहरू। पहिलेकाहरू विशेष गरी आरामदायी र परिचित वातावरणको साथ बाहिरी ठाउँहरूमा रमाइलो हुन्छन्। ढुङ्गाले ढाकिएको आयताकार, यस बीचमा, थप परिष्कृत सौन्दर्य प्रदान गर्दछ।
तिनीहरूको डिजाइन जेसुकै भए पनि, यी बाहिरी आगो पिटहरू ढुङ्गाले भरिएका छन् शैलीसँग खेल्न यी दुवैको साइज र रङ प्रयोग गर्दै। यी ढुङ्गाहरू बायोटेनाओलको अतिरिक्त, अन्य इन्धनहरूसँग काम गर्न सक्ने बर्नरलाई लुकाउनको लागि हो। धेरै जसो ब्राजियरहरूसँग म्यानुअल स्टार्ट हुन्छ, तर तिनीहरूलाई इलेक्ट्रिक स्टार्टको साथ फेला पार्न पनि सम्भव छ। कुन मूल्यमा? एक, निस्सन्देह, धेरै अधिक विशेष।
बाह्य रूपमा कंक्रीट वा ढुङ्गाले बनेको, यी ब्राजियरहरू धातु ब्राजियरहरू भन्दा भारी हुन्छन्। ठूलाहरू एक हुन डिजाइन गरिएका छन् बगैंचामा निश्चित ठाउँ, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई डिजाइनमा कसरी समावेश गर्ने बारे सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ।
केही निरन्तर बेन्चहरू, केही बगैंचाका सोफाहरू वा केही कुर्सीहरू बाहिरी ब्राजियरलाई घेर्नुहोस् र तपाईंको बाहिरी ठाउँ कन्फिगर गर्नुहोस्। तपाईलाई गर्मीको रातको आनन्द लिनको लागि थप आवश्यक पर्दैन। चन्द्रमामा आराम गर्नुहोस् वा परिवार र साथीहरूसँग समय बिताउनुहोस् आगो वरिपरि गर्मी रातहरू र उनको जादू।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » घरका सामानहरू » तपाईंको आँगन वा बगैंचामा न्यानोपन दिनको लागि बाहिरी फायर पिटहरू
Greenwashing, एक "हरियो" मार्केटिङ अभ्यास